MACLUUMAADKA SAWIRADA EEYAHA LAHAADO EE LABRADOR RETRIEVER - EEYAHA
Macluumaadka Sawirada Eeyaha Lahaado ee Labrador Retriever
'Othello (shaybaar 19-bilood jir madow ah) iyo Hamlet (shukulaato 17-bilood jir ah oo shaybaar ah) ayaa ku nool magaalada hooyadood, laakiin waxay jecel yihiin inay u kaxeeyaan dalka oo ay booqdaan ina-adeerkood Jake (jaalle 20-bilood jir ah) Sheybaarka). Dhamaantood waa dad dabbaasha jecel, laakiin marka biyuhu aysan helin waxay jecel yihiin shubka qumman inta lagu jiro bilaha xagaaga kulul.
Liistada Labrador Retriever Mix Noocyada Eeyaha
Black Labrador Hawl-gab
Jaalle Labrador Raaji
Shukulaatada Shukulaatada Ah
Hawlgab Fadhi Silver
Waxaa jira labo nooc oo Labradors ah, Labrador Ingiriis ah iyo Labrador Mareykan ah. Shaybaarka Ingiriisiga ee loo yaqaan 'bred Lab' wuxuu ka yimaadaa saamiga Ingiriisiga. Muuqaalkeeda guud wuu ka duwan yahay Shaybaarka Bred ee Mareykanka. Shaybaarada Ingiriisiga lagu barto ayaa ka culus, ka sii dhumuc weyn isla markaana xannibmay. Shaybaarka loo yaqaan 'American bred Lab' wuxuu ka yimaadaa keydka loo yaqaan 'American bred stock' waana mid dhererkiisu badan yahay. Dharka labiska ah waa mid siman oo aan lahayn hirar. Midabada koofiyaddu waxay ku yimaadaan madow, jaalle ama shukulaato adag. Waxa kale oo jira inuu jiro lacag ama midab cawlan oo dhif ah oo lagu tilmaamo AKC sida hooska shukulaatada . Midabkani waa mid muran badan dhaliyay qaarna waxay ku andacoodaan inuu yahay a Weimaraner iskutallaab, halka kuwa kale dhahaan waa isbeddel dhab ah. Madaxa Labrador waa mid ballaadhan oo leh joogsi dhexdhexaad ah. Sanka waa mid qaro weyn, madow oo eyda madow iyo jaalaha ah iyo bunni on eyda shukulaatada. Midabka sanka badanaa wuu qallalaa loomana arko inuu qalad ku yahay giraanta showga. Ilkaha waa inay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Afka waa si ballaaran u ballaaran yahay. Qoorta ayaa si saami ahaan u ballaadhan oo awood leh. Jidhku waxyar ayuu ka dheeryahay. Koodhka gaaban, adag waa sahlan tahay in la daryeelo oo biyo u adkaysta. Indhaha dhexdhexaadka ah si fiican ayaa loo kala saaray. Midabka indhaha waa inuu ahaado bunni eeyaha huruudda iyo madow iyo hazel ama bunni eeyaha shukulaatada. Shaybaarada qaarkood sidoo kale waxay yeelan karaan indho cagaar ama cagaar-cagaar ah. Eeyaha qalinka ah midabka indhuhu badanaa waa cawl. Cirifka isha waa madow eeyaha eeyaha huruudda iyo madow iyo bunni eeyaha shukulaatada. Dheguhu waa dhexdhexaad cabbir ahaan, hoos u laalaad iyo qaabab qaab leh. Dabada otterka ayaa dhumuc weyn salka ku haya, si tartiib tartiib ah ayey ugu tilaabsanaysaa caarada. Waxaa gebi ahaanba lagu daboolay timo gaagaaban, oo aan baalal lahayn. Cagaha ayaa xoog leh oo isku dhejisan cagaha sagxadda kuwaas oo ka caawiya eeyga dabaasha.
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan Mareykanka, Labrador Retriever waa daacad, kalgacal, kalgacal iyo dulqaad badan, sameynta eey qoys oo weyn. Caqli sare, dabeecad-wanaag, aad u diyaarsan oo doonaya inuu raalli geliyo, waxay ka mid tahay xulashooyinka ugu sarreeya ee loogu adeego eyga shaqada. Shaybaaraduhu waxay jecel yihiin inay ciyaaraan, gaar ahaan biyaha, marna ma doonayaan inay dhaafaan fursadda dabbaasha wanaagsan. Eeyahaani firfircoon waxay leeyihiin dabeecad aad u fiican oo la isku halleyn karo oo saaxiibtinimo leh, aadna u fiican carruurta isla markaana ay la mid noqon karaan eeyaha kale. Way damcaan hoggaaminta aadanaha oo u baahan inay dareemaan inay qayb ka yihiin qoyska. Shaybaarada ayaa si fudud tababaray . Qaarkood waxaa laga yaabaa inay la joogaan shisheeyaha mooyee bulsho , waxaa la doorbidayaa inta ay weli yaryar yihiin. Shaybaarka dadka waaweyni aad ayey u tababaraan iyaga inta ay yaryar yihiin si ay ciribta ugu dheereeyaan, oo aysan u siin bool bannaanka iyo irridda looga baxo dadka hortooda. Eeyahaani waa eeyo, mana ahan eeyo ilaalo ah, in kastoo qaarkood lagu yaqaan inay ilaaliyaan. Waxay noqon karaan wax duminaya haddii aadanuhu uusan ahayn 100% hogaamiyaha xirmada iyo / ama haddii aysan helin wax ku filan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed , oo aad uga tagay badan qalabkooda . Khadadka bandhigu guud ahaan way ka culus yihiin kana sahlan yihiin khadadka dhulka. Khadadka aagagga waxay u muuqdaan kuwo firfircoon oo si fudud u noqon doona noqo mid sareeya iyada oo aan jimicsi kugu filan la samayn . Shaybaarada lagu kaydiyo khadadka Ingiriisiga (Shaybaarada Ingiriisiga) ayaa ka xasilloon oo dib loo dhigay marka loo eego Labradors lagu kaydiyo khadadka Mareykanka. Shaybaarada Ingiriisiga ayaa ka dhakhso badan nooca Mareykanka.
Dhererka: Ragga 22 - 24 inji (56 - 61cm) Dumarka 21 - 23 inji (53 - 58 cm)
Miisaanka: Ragga 60 - 75 rodol (27 - 34 kg) Dumarka 55 - 70 rodol (25 - 32 kg)
Ragga qaar waxay kori karaan illaa 100 rodol (45 kg) ama ka badan.
Ku soo dhowaanshaha sinta iyo xusulka dysplasia, PRA, burooyinka unugyada iyo cilladaha indhaha.
Labrador Retrievers waxay ku fiicnaan doonaan aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waxay dhex dhexaad ka yihiin gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Labrador Retrievers waa eeyo firfircoon, oo ku faraxsan shaqada iyo ciyaar adag. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, kacsan, socod dheer , orod ama ku garabsoco markaad baaskiil wado. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Waxay ku jiri doonaan sharaftooda haddii aad siiso shaqo ay qabtaan. Culeyska si fudud ku kor, ha ku dhaafin quudinta.
Jilicsan, timo gaaban, jaakad laba jibbaaran ayaa fududahay in la hagaajiyo. Shanlee oo si joogto ah ugu cadayo burush adag, oo fiiro gaar ah u leh dharka hoose. Maydho ama shaambo qallalan oo keliya markii loo baahdo. Eeyahaani waa celcelis daadiyayaal.
Markii loo yaqaan 'Dogyada' St John, 'Labrador Retriever waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan Mareykanka. Shaybaarka ayaa ku yaal magaalada Newfoundland, halkaas oo ay ka wada shaqeyn jireen kalluumeysatada oo qabta kalluun ka soo baxa khadadka oo loo tababbaray inuu ku boodo biyaha barafka ah si uu uga caawiyo soo jiidashada shabagyada. Tijaabooyinka waxaa Ingriiska keenay 1800-meeyadii markab Ingiriis ah oo ka imanaya Labrador. Noocyada waxaa lagu tallaalay dejiyaha, isbaaniisyada iyo noocyada kale ee soo-celinta si loo hagaajiyo dareenkeeda ugaarsade. Labrador waa mid aad u tababaran mana aha oo kaliya inuu caan ku yahay wehel qoys laakiin sidoo kale wuxuu ku fiicanyahay: ugaarsiga, raadinta, soo celinta, ilaaliyaha, shaqada booliska, baaritaanka mukhaadaraadka, hagaha indhoolayaasha, eyga adeega ee naafada, raadinta iyo samatabbixinta, gawaarida, dhaqdhaqaaqa, tartanka tijaabada garoonka iyo u hoggaansamida tartanka.
Ka samee shaybaarka hurdiga ah ee jira 20-ka bilood, Hamlet shaybaarka shukulaatada ah ee jira 17-bil iyo Othello shaybaarka madow ee jira 19-ka bilood.
Henry hurdi Ingiriis huruud ah Labrador Retriever 1 sano iyo 9 bilood, waxaa cunay Wintergate Labradors ( Eeg inbadan oo Henry ah )
Bernie shukulaatada Labrador Retriever isaga oo 6 sano jir ah— 'Bernie weli wuxuu aaminsan yahay qalbigiisa inuu yahay eey dhab ah.'
Kaysar Cajiib ah Labrador madow 11 bilood jira— 'Waan ku jeclahay adiga Caesuuuu!'
Maggie May shukulaatada Labrador Retriever at 4 years— 'Kani waa aniga jaceylkeyga Valentine, Maggie May. Waxay ku dhalatay 2010 bishii Febraayo 14, Maalinta Jacaylka, taas oo ah wax lagu qoslo maxaa yeelay waa shukulaato labby :) Waxaan helay Maggie gugii 2010. Waxay ahayd 4 1/2 bilood jir. Iyo gebi ahaanba waalan. Bilihii ugu horreeyay ee aan lahaa iyada, waxaan haystay a xiriir jacayl-adag iyada la. Sababtoo ah iyadu si aad ah ayey uga baxday xakamaynta, oo ay weheliso inay aad u badan tahay xukuma eey , Waxay ahayd inaan hubiyo bilowgii inay ogaatay inaan ahay xirmo madax . Markii ay sii weynaatay waxay sidoo kale muujisay calaamado gardaro ah eeyaha iyo dadka ka baxsan xirmooyinkayaga (qoyska). Aniga gardarrada kuma dhibin aad iyo aad, maadaama dadku aysan fileynin in Shaybaarada ay noqon doonaan kuwa gardarro ah taasna ay aniga ila ahayd wax wanaagsan oo nabadgelyo ah, laakiin waa inaan hubiyaa inay ogtahay inay taasi jirto markii aan idhi 'Jooji', 'Maya', ama 'Garaaca iska da' , Waxay isla markiiba joojin lahayd qayladeeda iyo / ama cabaadka. Maggie waxay u qaadatay tababarka sida pro. Waxay jeceshahay inay 'shaqeyso', sidaan ugu yeedhay. Diiradeeda iyo diiradeeda aniga waxay ahayd, welina waa, adduunkan. Markii ay la ciyaareyso saaxiibadeeda doggie, waan wici karaa iyada oo si ficil ah ayey iigu duuli doontaa aniga, iyadoo gebi ahaanba ilaawaysa eeyaha kale oo taa badalkeeda aniga diiradda saareysa. Diiradeeda aniga ayaa ahayd mid aad u weyn oo ay ka baxday xarig lagu kalsoonaan karo ku dhowaad xaalad kasta 11 bilood. Hadda ugu yaraan 5 sano jir, way fiicantahay. Waxay qaadataa wax badan si loo helo eey u dhow dhammaystirka, Maggie-na way ugu dhowdahay sida eygu u heli karo aragtidayda. Maggie waxay leedahay 3 walaalo cunnooyin ah: Sonkor, waa 14 jir Labrador / Dahabi ah Golden Retriever , waa saaxiibkeeda ugu fiican. Angus (3 sano jir isku dhaf ah) iyo Tippy (1 sano jir) God Bull / Corgi ) waa lamaanayaasheeda dambiga. Waan wacaa Saddexda Hood . '
Maggie May shukulaatada Labrador Retriever at 4 sano
'Mocha (90 lbs.), Labkeena dheddigga shukulaatada ah ee 2 jirka ah iyo Gracie (23 lbs.), Shaybaarkeena dumarka ah ee bilaha ah ee 4-bil jirka ah — Waligay ma arag laba eey oo isku mid ah, runti waa saaxiibka ugu fiican. Waxaan maqli jiray dadka oo dhaha hadaad ey fiican leedahay oo aad leedahay eey, kan weyn ayaa kaalin weyn ka qaadan doona tababarka arday cusub oo aan hada ogahay inay run tahay. Iyagu waa qayb weyn oo ka mid ah qoyskeenna mana qiyaasi karno nolosha la'aantood. '
Kani waa Oscar madow Mareykan ah oo labrador Retriever ah oo jira 2 sano. Wuxuu sugayaa milkiilihiisa inuu kubbada ku tuuro. U fiirso sida dabada uu u kaco. Taasi waxay muujineysaa inuu kujiro xaalad maskaxeed xamaasad leh. Oscar wuxuu helayaa jimicsi fara badan oo jimicsi kubbadeed. Jimicsiga noocan ahi jirka ayuu ka daalaa, laakiin maskaxda ayuu ku hayaa habka xiisaha badan. A xirmo socod ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo jimicsado loona dejiyo maskaxda .
Samatabbixinta dadka waaweyn ee jaallaha ah Labrador Retriever
Zeke shukulaatada Labrador Retriever ee 13 sano jir ah— Saaxiib oo dhan. Marna shisheeye lama kulmin. Suurtagalnimada mid ka mid ah kuwa ugu badan eeyaha safray gudaha Mareykanka (ama kan ugu sarreeya 1%). Aad u xiisay isaga.
'Kani waa Eygayga Bauer ee jira 3 bilood. Isagu waa huruud huruud Labrador ah oo ka soo jeeda Heather Hollow Farm Labradors ee Hardwick, VT. Wuxuu jecel yahay inuu in badan seexdo oo uu jiito dagaalka. Waxa kale oo uu jecel yahay inuu qodo ardaaga hooyada iyo aabaha aan aad ugu faraxsanayn :-). Wuxuu jecel yahay socodka iyo la ciyaarista eeyaha kale. Waa arday aad u caqli badan oo si dhakhso leh wax u barta. Isagu si ficil ahaan ayuu u tababaran yahay - waxaan u isticmaalnaa gambaleelka gambaleelka nidaamka albaabka — wuuna seexdaa habeenkii oo dhan. Wuxuu jecelyahay sanduuqiisa oo kaligiis ayuu gali doonaa markuu ubaahdo waqti kali ah. Waxa kale oo uu jecel yahay inuu ku salaaxo dhabtaada, taas oo dhibaato ku abuuri karta markuu 80 jir yahay. hal maalin :-)'
Shukulaatada Ingiriisiga ah Shukulaatada Labrador-Sawir waxaa iska leh Dhammaadka Mt. Labradors
'Molly Girl at 2 bilood — Molly waa shey kasta oo shukulaato ah, laakiin midkoodna ma ahan sheekooyinka naxdinta leh ee layga digay! Iyadu ma aha tamar sare, malaha sabab u ah qayb ka mid ah jimicsi maalinle ah Waxaan hubiyaa inay hesho. Waxay u heellan tahay inay ka farxiso oo aad u daacad ah. Waxay qof walba ku salaamaysaa guntin dabada ah waxayna jeceshahay in lagu jeclaado! Sida eey kasta, joogtayntu waa muhiim marka tababarka, waana ku mahadsan tahay taas, iyo jardiinooyinka eyda , Molly waa eeyga ugufiican :) '
Ripley qalinka Labrador Lacageed ee 11 bilood jira
Silver Labrador Retriever, waxaa iska leh sawirka Crist Culo Kennels
Ku dawee shaybaarka shukulaatada 1 sano jir ul dheer afkiisa
Seddex Eey oo qurux badan oo qurux badan oo muujinaya saddexda midab ee Labrador, xagga hore iyo gadaal, madow, jaalle iyo shukulaato, sawir waxaa iska leh Mirage Labrador Retrievers
chihuahua oo lagu qasi jiray adhijirka australia
'Kani waa shaybaarkayaga cusub ee la qaatay ee loo yaqaan' Dozer '. Wuxuu ku jiraa hal sano iyo bar sawirkan waxaanan ka soo qaadanay rodolkii. Sida sheybaarada badankood wuxuu jecel yahay biyaha (sida aad sawirka ku aragtaan) xaqiiqdii, wax yar ayuu aad u jecelyahay. Waxaan u baahanahay inaan kala shaqeyno isaga inaanan biyo badan ku mashquulin, laakiin wuxuu aad u jecel yahay inuu ka farxiyo oo aysan noqon mid aad u adag. Waan ku qaadnaa isaga laba socod maalintii isaga oo wata boorsada eyda, mid waa socod saddex-mayl ah oo ugu yaraan nus saac lagu dabaalanayo. Waxaan daawadaa Eyga Whisperer markasta sidaa darteed waan ogahay in la raacayo qaababkiisa iyo Dozer oo aad u doonaya inaan ka farxiyo in wax kasta oo arrimo uu haysto aan awoodi doonno inaan horumarinno.
Dozer Black Labrador Retriever da'da 1 1/2 sano
'Cappy waa 17-bilood jir nadiif ah oo labrador Retriever ah. Cappy waa wehel weeyn oo dhan iyo eey baashaal. Hawlaha uu jecel yahay waxaa ka mid ah raacitaanka baabuurta, dabaasha, soo qaadashada, la kulanka dad cusub iyo la ciyaarista walaashiis weyn, Shaybaar madow. '
'Cappy oo sameeya waxa uu jecel yahay… booqashada makhaayad kafee ah oo maxalliga ah oo uu ku fadhiisto usha kulul ee milkiilaha. Cappy wuu jecel yahay dukaanka kafeega laakiin waxaan u maleynayaa inay qayb ahaan sabab u tahay inuu helo buskud markii uu dukaanka ku badnaa. '
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah Labrador Retriever
Labrador Sawir-dhimista Lab
Labrador Retriever Sawirada 2
Labrador Retriever Sawirada 3
Labrador Sawir-dhimista Sawirada 4
Labrador Retriever Sawirada 5
Labrador Sawir-dhimista 6
Labrador Sawir-dhimista Sawirada 7
Labrador Sawir-dhimista Sawirada 8
Labrador Sawirrada Fasaxa 9
Labrador Retriever Sawirada 10
Labrador Retriever Sawirada 11
Soo Celinta Silver Labrador
Labrador Eeyaha Cunista: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
boston terrier iyo chihuahua oo iib ah
shiino sawiro budada shiidan
nova scotia duck tolling qashinka poodle mix
waa waxa eey a schnoodle